baahinta tooska ah ee goobta bandhigga, OK waab cajiib show!
Sebtember 24, Bandhigga Cadka ee 27aad ee Cadka Caalamiga ah ayaa si ballaadhan loo furay! Wadar ahaan 868 shirkado warshadeed ah ayaa kaqeybgalay bandhigan Aagga bandhiggu wuxuu gaarayaa 80,000 mitir murabac ah! OK Booth [7S39] waa dad badan oo cajiib ah Muuqaalka ayaa soo jiitay pa ...
Martiqaadka Carwada Carwada Cilmiga Caalamiga ah ee Cadka
Waraaqda Cadka 27aad ee Cadka Caalamiga ah ayaa lagu qaban doonaa Nanjing International Expo Center laga bilaabo 24ka ilaa 26ka Sebtember Waxaan si kal iyo laab ah kuugu martiqaadeynaa inaad ka soo qeybgasho oo waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyn doono gacmaha iyo gacmaha. Ku safrid tikniyoolajiyadda waraaqaha guriga. Waab ok ...
Wuhan, Nabadeey! 2020, OK waxay kugula kulmeysaa Nanjing!
Bandhigga Teknolojiyada Caalamiga ah ee Cadka ee 26-ka ah ee saddexda maalmood ee 26-ka ah ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay Xarunta Wuhan International Expo Center. Saddexda alaabood ee taxanaha ah ee ay shirkadeennu ku soo bandhigtay bandhiggan ayaa si guul leh u soo jiitay indhaha macaamiil badan oo ka kala yimid gudaha iyo dibaddaba. Qof walba wuu fooraraa ...
Soo-saaraha Qaranka ee Tiknoolajiyadda OK wuxuu ku Iftiimay Cadka Adduunka ee Milano, Talyaaniga
Laga soo bilaabo Maarso 25th ilaa 27th, 2019, Tissue World Milan, oo ah bandhig warshad waraaqo labadii sanadle ah lagu qabto magaalada Milano, Talyaaniga, ayaa si weyn loo bilaabay. Kooxda bandhigga OK Technology waxay yimaadeen magaalada Milano maalmo kahor waxayna si buuxda ugu diyaar garoobeen inay soo bandhigaan tikniyoolajiyadda qaangaarka ah iyo tikniyoolajiyadda cusub ee unugyada taranka ee Shiinaha lagu sameeyay ...
Afuufo wacitaanka ka hortagga cudurka faafa! OK waxay soo saartaa 200 nooc oo qalabka wax soo saarka maaskaro ah bil kasta!
Tan iyo markii Aqoonyahan Zhong Nanshan uu ku dhawaaqay infekshanka bini-aadamka ee Wuhan ee coronavirus cusub ee CCTV Janaayo 20, 2020, cudurka Wuhan wuxuu saameeyay qalbiyada 1.4 bilyan oo qof oo Shiine ah In kasta oo fiiro gaar ah loo siinayo aafada, qof walba wuxuu bilaabay inuu fiiro gaar ah u yeesho caafimaadka ...